China Laser yekucheka muchina Vagadziri, fekitori, Mutengo - Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co, Ltd.
Imba > Zvigadzirwa > Laser yekucheka muchina
Laser yekucheka muchina ndeye laser michina iyo inoshandisa iyo laser yakaburitswa kubva kune iyo laser kutarisa kune yakakwira simba uye kuwanda laser danda, kuitira kuti iyo midziyo ikwanise kusvika padanho rekunyungudika kana kufashaira, uye panguva imwecheteyo, yakakwira-kumanikidza magasi coaxial nedanda rinovhuvhuta simbi yakanyungudutswa kana vaporized kure.
Yakasiyana-siyana yakawanda-inoshanda laser cutters inogona kuwanikwa pano. Semuenzaniso: cnc laser yekucheka muchina, acrylic laser yekucheka muchina, hobby laser yekucheka muchina, nezvimwe,. Uye zvekare, inoshandiswa zvakanyanya mumamiriro mazhinji, senge: huni, simbi, faibha, kiyi, huni, desktop, zvishongo, dehwe, simbi nezvimwe
Tenga rakanakisa remhando yepamusoro Laser yekucheka muchina kubva kuShenzhen Simida izvozvi. Wepamusoro mhando Laser yekucheka muchina, ​​sarudzo huru uye kuraira kwehunyanzvi hunhu hwedu, unogona kuva nechokwadi chekutenga iyo Laser yekucheka muchina nefekitori yedu. Uye isu tinokupa iwe yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi uye inouya nenguva.